अशोक सिलवाल | Ratopati
मदनमणि दीक्षितसँग कविताबाहेकको त्यो कुर्सी वार्ता access_timeसाउन ३२, २०७६
प्रिय ! तिमीसँग छुुट्टिएर जङ्गलमा सुतिरहेको बेला मैले तिमीलाई सपनामा देखेँ । अङ्गालो हाल्न खोज्दा आकाशबाट देउताहरुले देखे र रुन थाले । रुखका पातहरुबाट ती आँशु शीतविन्दु बनेर तप्प तप्प खस्न थाले । ... हेर, म यो जङ्गलमा ठूलो ढुङ्गामा तिम्रो तस्विर बनाउँदैछु । ति...
यी धुवाँ तिम्रै जलिरहेको चिताको हो ! access_timeफागुन १८, २०७५
बिहानको १० बजिसके पनि काठमाडौँ अझै तातेको थिएन । दुई दिनअघि मात्र फूलचोकी र चन्द्रागिरीमा हिउँ परेको थियो । क्यानाडाको राजधानी ओटावाबाट २ हजार किलोमिटरको दुरीमा रहेको फोर्ट फ्रयान्सिसबाट आएको ब्रायन भन्दै थियो, ‘जो हिजो संसारकै सबभन्दा चीसो ठाउँ थ...
गोरु जुधाइको एक बहाना : प्रेम प्रस्ताव मात्र होइन, माया साटासाट पनि भए access_timeमाघ १५, २०७५
मुलघर राजविराज भए पनि काठमाडौँको रानीबारीमा घर बनाएर बसेका अवधेश दास, नजिकैको टोखा पुगेका थिए जीवनमै पहिलो पटक । नुवाकोटे दीपक भन्दै थिए, ‘कविलाशबाट हिंडेर यहाँ आइपुग्न ६ घन्टा लाग्थ्यो । त्यसताका उता पहाडतिर लसुन–प्याज लगाउने चलन सुरु भएको थिए...
‘ड्याडी ! मलाई माया गर्नुहुन्छ भने चुरोट नखानुस्, ड्रिंक्स नगर्नुस्’ access_timeमाघ ११, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात लाङटाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए। सगरमाथा उभिएको देशबाट महासागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको अन्तिम शृङ्खला हो यो।) सिगिरियाको टपबाट परपरसम्म हरियो श्रीलंका देखिन्थ्...
रावणको दरबार, जहाँ पुष्पक विमान ल्याण्ड हुन्थ्यो रे ! access_timeमाघ ९, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात लाङटाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट महासागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको सातौँ शृङ्खला हो यो ।) कोलम्बोबाट झन्डै २ सय किलोमिटर परको सिगिरिया जाँदै गर्दा बसको सबभन्...
कोलोम्बोमा ‘हट केक’ बन्यो नेपाली टोपी access_timeमाघ ८, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात् लाङ्टाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट महासागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको छैटौं शृङ्खला हो यो ।) ब्रेकफास्टपछि इन्डियन फेडरेसन अफ वर्किङ जर्नालिस्ट (आईएफडब्लुजे)का भार...
‘डु यु वान्ट नाइस गर्ल ?’ access_timeमाघ ७, २०७५
हिमालयका दूत अर्थात लाङ्टाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट महासागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको पाँचौँ शृङ्खला हो यो । संयोग हो कि सधैँ त्यस्तै, कोलम्बो र आसपास ट्राफिक निकै व्यवस्थित नभए पनि अस्त...
मान्छेपिच्छेको रोजाई, मान्छेपिच्छेका कथा access_timeपुस २८, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात लाङटाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट सागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको चौथो शृङ्खला हो यो ।) इन्टरनेटबाट पढिएका कुरा अर्कै हो । तर, आफ्नै पाइतालाले त्यही धर्तीमा टेक...
तिनको बनावटी मुस्कान र मेरो तयारी access_timeपुस २६, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात लाङटाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट सागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको तेस्रो शृङ्खला हो यो ।) ‘नमस्कार !’ एयरहोस्टेसले हँसिलो भएर बडो स्मार्ट त...
श्रीलंका सिरिजस्: हुलियाले कहिले हँसायो, कहिले रुवायो access_timeपुस २५, २०७५
(हिमालयका दूत अर्थात लाङटाङ सद्भावनादूत अशोक सिलवाल केही समयअघि श्रीलङ्का गएका थिए । सगरमाथा उभिएको देशबाट सागरले घेरिएको देश गएका तिनै यात्रुको यात्रा संस्मरणको दोस्रो शृङ्खला हो यो ।) कोलम्बो सिटी होटलको सबभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको रेस्टुरेन्टमा मलाई चाइनीज मु...
श्रीलङ्का सिरिज : हुलियाले मान्छेलाई खै केके बनाउँछ access_timeपुस २४, २०७५
(सगरबाट सागर गएको एउटा यात्रुको कथा हो यो । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश नेपाल भूपरिवेष्ठित हो भने श्रीलङ्का समुद्रवेष्ठित मुलुक । तर नेपाल र श्रीलङ्का रामायणकालदेखि जोडिएको पाइन्छ । नेपालकी छोरी सीताको अयोध्याका राजकुमार रामसँग विवाह भएको र रामसँगै वनवास गएकी स...
कैलाश मानसरोवर कोराको निचोड– अप्प दीपो भवः access_timeअसोज १७, २०७५
केरुङबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा बाह्र दिनअघि तिब्बत छिर्दाको जस्तो कुनै ‘क्युरियोसिटी’ थिएन । तर देश फर्किनुमा आकाश जस्तो फराकिलो खुशी थियो । रसुवागढीबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आत्मविश्वास वसन्तको बनको हरियालीजस्तै बाक्लिएको थियो । मातृभूमिमा पहिलो पाइ...
सागा : ह्वेर आई लस्ट माई स्टिक access_timeअसोज १५, २०७५
बाटो उही तर मनस्थिति फरक । दार्चेनबाट सागा फर्किंदै गर्दा फेरि एक पटक आँखाभरी मानसरोवर अटाउने अवसर पायौँ । मानसरोवर किनारको होरमा सुकेका माछा र चराका नङ्ग्राहरू देख्यौँ । अरू थुप्रै जडीबुटी पनि बेच्न राखिएका थिए । ‘के हो यो ?’ मैले स...
कैलाशका कथा र किंवदन्ती access_timeअसोज १२, २०७५
जुटलपुक ब्युँझिसकेको थियो । तर, ऊ गुम्बाजस्तै शान्त थियो । हामीले कैलाश कोरालाई बिहानैदेखि कन्टिन्यु गर्यौँ । लक्ष्य फत्ते गर्ने मनोविज्ञानले राम्ररी काम गरेको थियो । ‘दार्चेन पुगेपछि पवित्र कैलाश कोरा पुरा हुनेछ’, भनेर यात्रीहरू हौसिएका थिए ।&nbs...
कैलाशको काखकी डोल्मालालाई चुम्दा access_timeअसोज १०, २०७५
‘बाई बाई देरापुक’, बिहान हिँड्दाहिँड्दै भारी मनले मनमनै भनेँ । अनेक अलौकिक अनुभवसहित दुई रात बिताएको देरापुकमा मैले कैलाशसँग आध्यात्मिक मायाप्रिती गाँसिसकेको थिएँ । त्यो कुनै स्वार्थको सम्बन्ध थिएन, आस्थाको थियो । आदर झन् बढी थियो । ...
अद्भूत कैलाश : छुने मख्ख, हेर्ने पनि मख्ख ! access_timeअसोज ८, २०७५
उत्तरतिर हिमाल हेरेर हुर्केको म, देरापुकबाट एक टङ्कारले दक्षिणतिर हिमाल हेर्दै थिएँ । हो, बिहान सखारैदेखि मेरो आँखाभरी कैलाश थियो । अनि बादलसँग मिलेर छिनछिनमा अनेक आकृति र स्वरूप बनाउन व्यस्त थियो कैलाशको नर्थ फेस । उसको बहुरूपी अनुहारले मेरो मन नाचिरह...
दार्चेनदेखि देरापुकसम्मको आकाश र धर्तीका लीला access_timeअसोज ५, २०७५
यात्राको क्लाइमेक्स सुरु हुँदै थियो दार्चेनबाट । हामी कैलाशको खास कोरा थाल्दै थियौं । ५२ किलोमिटर परिधिको कैलाश कोरा तीन दिनमा पूरा गर्न हामी कस्सिएका छौँ । कतिले सुरुबाटै पैदल यात्रा गरे, हामी केही यात्री चाहिँ दार्चेनबाट ६ किलोमिटर अगाडिसम्म गाडीमा गयौ...
आँखा रसिला तर ओठमा थियो मुस्कान ! access_timeअसोज १, २०७५
घाँटीमा विमलजीको क्यामरा भिरेर म मानसरोवर किनारमा ठिङ्ग उभिएको छु । चराहरुले सुकेका घाँस वा स–साना जराहरुलाई मिलाएर बलियो गरी बनाएका थुप्रै गुँड देखिएका छन् । तालको पानीमाथि केही चरा लहरै टुसुक्क बसिरहेका छन् । केही चरा चाहिँ कहिले एक्लै त कहिले हुलमा म...
मनोरम मानसरोवरमा भेटिइन् मनमोहिनी access_timeभदौ २९, २०७५
बाटो शानदार थियो । आकाश उस्तै प्रिय । शब्द नबुझे पनि तिब्बतीयन गीतले मनको कुनाकुनासम्म कम्युनिकेट गरिरहेको थियो । धर्ती छोड्नै नपर्ने आकाशमार्गमा ड्राइभर गाडी गुडाइरहेको थियो । हामी सागाबाट मानसरोवर जाँदै थियौँ । ‘यस्तो रोड कहाँ थियो र ! पठारैपठार ...
सागामा कल्याणीलाई हाइले हान्यो access_timeभदौ २७, २०७५
‘गुड मर्निङ’, गाडी चढ्न लाग्दा मैले यात्रीहरूलाई भनेँ । तर एउटा कुकुरलाई ‘गुड मर्निङ टाइम’ भइसकेको रहेनछ । काठमाडौंका कुकुरजस्तै ऊ पनि सडकमा मस्तसँग घोप्टो परेर सुतिरहेको थियो । केरुङको होटलमा नेपालकै किचेन ब्वाइहरूले तयार पारेको ...
केरुङमा 'राष्ट्रपति सी' सँग सेल्फी access_timeभदौ २५, २०७५
नेपाल छाड्ने तरखर गर्दैगर्दा टिमुरेमै बिहानको नौ बजिसकेको थियो । नेपाल–चीन सीमाना नजिकिँदै गर्दा एकजना बुढीआमा काँधमा आफूभन्दा गह्रँुगो झोला बोकेर अग्लो लौरो टेक्दै स्याफ्रुतिर झर्दै थिइन् । बुढाबुढीहरूको फोटो खिच्दा मलाई एउटा सिङ्गो जीवन खिचेजस्तो लाग्छ । ...
सीमानामा देश दुख्दा access_timeभदौ २२, २०७५
पटक पटक दोहोर्‍याएको ‘ऊँ नम शिवाय’ मन्त्रको कोरसबाट दिन प्रारम्भ भएको थियो । तर ‘सोचेजस्तो हुन्न जीवन’ भनेजस्तै भयो हामीलाई । स्याफ्रुबेसीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको व्यापारिक नाका केरुङ पुग्ने योजना थियो । प्राय घण्...
पासपोर्ट हराउँदाको पिरलो access_timeभदौ २०, २०७५
नेपाल दुई विशाल मुलुकका बीचमा छ । तीनतिर भारत र उत्तरपट्टि चीन । हाम्रा लागि दुवै छिमेकी गाई गङ्गा बराबर हुन् । तर, व्यवहारमा केही असमानता छन् र त्यसमध्ये एक हो– भारतमा खुल्ला आवतजावत गर्न पाइन्छ भने चीन जान पासपोर्टर भिसा चाहिन्छ । हामीले चीनको स्वशासित क्षे...
ल्हासासँग मोहनी थियो तर बोलाई डोल्मालाले access_timeभदौ १८, २०७५
काठमाडौं झरीले भिजेको थियो । बाटो उस्तै हिलो । त्यसैले दिनभर कतै गएको थिइनँ । मोबाइल पनि साइलेन्समा राखेको थिएँ । निकैवटा कल आएका रहेछन् । फर्काउने जाँगर पनि चलेको थिएन । जाने जाँगर नलागे पनि पशुपतिले जसरी पनि जानुपर्छ है भनेर अघिल्लै दिन भनेकाले साँझ भरतजीको...
‘गो गो गो गोसाईंकुण्ड...गो’ access_timeभदौ १०, २०७५
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लाङटाङ म्याराथन प्रतियोगिता हुँदै थियो । त्यसका लागि ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले मालीगाउँस्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लाङटाङ सद्भावना दूतको हैसियतले वक्ता अतिथिका रूपमा म पनि आमन्त्रित थिएँ । १२ वैशाख २०७...